Ciyaaraha – Banaadir Times
Home Archive by category Ciyaaraha
By banaadir 23rd April 2021 No comment
War murtiyeedka Golaha Amniga iyo Nabadda Midowha Afrika ayaa looga codsaday AMISOM inay la socoto dhaq dhaqaaqa Ciidamda Amniga Soomaaliya si looga hortaggo iska hor imaadyo ka dhaca Magaalada Muqdisho. Sidoo kale Guddoomiyaha Midowga Afrika ayaa laga codsaday inuu qabto shirarka dalalka Ciidamada ka jooga Soomaaliya heer Safiiro iyo heer taliyeyaasha ciidamada si looga
By banaadir 30th December 2020 No comment
Ciyaarta kama dhanbeysta ah ee tartanka kubadda cagta maamul goboleedyada iyo gobalka banaadir oo la ciyaari doona bari.
Real Madrid ayaa gurigeeda Santiago Bernabeu waxa ay cashar ugu dhigtay kooxda ay isneceb yihiin ee Barcelona iyagoo ku garaacay 2-0 islamarkaana qaab ciyaareed la jecleystay soo bandhigay qeybtii labaad ee ciyaarta. Gool uu dhaliyay Vinicius Jr. bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta iyo gool uu ku quusiyay Mariano Diaz oo bedel ciyaarta ku soo galay […]
Kulanka weyn ee El Clasico ayaa caawa lagu madalsan yahay inay isku arkaan Gagida Barnabeu labada naadi ee aadka ugu xifaaltama horyaalka dalka Spain ee Real Madrid iyo Barcelona, saacaddu marka ay tahay 11:00 ka habeenimo ama shan saac oo caawa ah. El Clasico waa kulanka ugu xiisaha badan kubadda cagta kulanka caawa ayaana ah […]
By banaadir 18th October 2018 No comment
Waxaa indhoweeyto lagu qabtay magaalada Bristol (UK) xaflad lagu soo dhaweeynaayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Xafladaas ayaa waxaa loo soo abaabulay si heer sare ah. Waxaana ka qeybqaatay qeybaha kala duwan ee bulshada sida odayaal, dhalinyaro, gabdho wiilal, wadaado, waranle iyo aqoonyahano. The Bristol Hotel ayaa Xafladaas ka dhacay